Fampiroboroboana orinasa-HEC : raikitra ny “Loka Bernard Ramanantsoa » | NewsMada
Fampiroboroboana orinasa-HEC : raikitra ny “Loka Bernard Ramanantsoa »
Manomboka ny fifaninanana ho an’ny orinasa eto amintsika, nampitondraina ny anarana hoe : « Loka Bernard Ramanantsoa », karakarain’ny fikambanana Exed Community HEC any Paris eto Madagasikara, tarihin-dRasolondraibe Mamy. Nambaran’ny filohan’ny vaomieran’ny fifandraisana ao aminy, Randriamifidimanana Laza, fa ilaina ny fifaninanana toy izao satria hita fa tsy ampy ny fanomezan-danja ny mpandraharaha miezaka ao anatina orinasa eto amintsika. Ahafahan’ny orinasa malagasy misongadina eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena anefa izany. Tsy natao ho an’ireo mpandraharaha nivoaka tao amin’ny sekoly ambony HEC irery ihany ity fifaninanana ity fa ho an’ny eto Madagasikara manontolo.
Misampana lohahevitra telo ny fifaninanana. Voalohany, ho an’ny lafiny fifandraisana amin’ny mpanjifa, amin’ny lafiny fahalalana, ny fahalalam-pomba sy fandraisana ary ny torohevitra sy tohana azy ireo. Faharoa, tombana ny fahaizana maneho manome lanja ny orinasa. Fahatelo ny fitantanana sy ny fanomezan-danja ny mpiasa ao amin’ny orinasa.
Hatao laharam-pahahamehana amin’ireo mpifaninana ny orinasa mampiasa olona mihoatra ny 10. Manome vaovao ny hilatsahan-kofidina ny mpikarakara, ny 15mey- 15 jona 2017, ary hivoaka amin’ny volana septambra ho avy izao ny valin’ny fifaninanana.